Barashada Tooska ah ma ku habboon tahay ilmahayga? - Axdiga Waxbarashada Shirarka
Cunuggaygu Ma U Baahan Yahay Waxbaritaan Mideysan?
Talooyin ka socda La-Taliyaha La-tashiga Sameynta Waxbaridda Internetka.
Waxaa jira fikrad qaldan oo ah in aadista iskuulka ay fududahay. Ma fududa! Waxay ku qaadataa shaqo iyo u go'naan meel kasta oo waxbarasho ah. Dhismooyinka iskuulku sida caadiga ah waxay abuuraan qaab dhisme iyo jadwal ardayda ay raacaan, taas oo ka caawineysa inay is abaabulaan, iyo howsha. Qaab isku mid ah ayaa muhiim ah oo waxtar leh kana caawinaya cunuggaaga inuu noqdo barta internetka guuleysta.
Abuur shaqo ama meel wax lagu barto oo ka madaxbanaan waxyaabaha carqaladeysan isla markaana u furan adeegsiga iyadoon wax carqalad ah lagu sameyn.
Telefishanka, cuntada diyaarinta, iyo sheekaysiga aan caadiga ahayn waxay carqaladeeyaan oo ka mashquulaan canuggaaga awoodda uu u leeyahay inuu u foogo iyo dhammaystiro shaqada.
Eeg horumarka cunuggaaga iyo waxqabadka internetka maalin kasta. Waa inaad kormeertaa waxbarashada cunuggaaga.
Waalid ahaan, waa masuuliyadaada inaad dejiso waxyaabaha laga filayo waxbarashada iyo inaad kormeerto waxqabadka iyo horumarka ardaygaaga. Isaga ama iyadu ha ku dhex socdaan hawsha oo ha ku tusaan waxqabadka iyo isgaarsiinta ay ku lug leeyihiin. U adeegso boggaaga waalidka si aad u hubiso horumarka iyo buundooyinka, ula socoto waqtiga hawsha lana xiriir macallimiinta.
Dhis jadwal maalinle ah oo JOOJI IT!
Naqshadeyn shaqo maalinle ah oo aado iskuulka. Laakiin qorista (ku dhaji halka uu ilmahaagu ku arko) ama gelinta aaladda ilmahaaga (u dejiso qaylo-dhaan sida kiciyayaal ama xusuusiyayaal) waxay gacan ka geysan doontaa in la aasaaso astaamo dabeecad wanaagsan oo ka caawin doona waxqabadka dugsiga.
Waqti cayiman ku dadaal inaad ka shaqeyso casharadaada maalin kasta oo WAXAAD sameyso.
Ilmahaagu waa inuu ugu yaraan 4 saacadood DAVE ku dhigto waxbarashada iyo qabashada shaqada fasalka. Haddii isagu ama iyadu aysan gelin wakhti go'an oo ay dugsiga ku galaan way adkaan doontaa inay ku qalinjabiyaan waqtiga. Ardayda dugsiga sare waa inay kasbadaan 24 dhibco ah muddo 4 sano ah; Tani waa 6 dhibco sanadkii.
Maalin kasta la xiriir macallimiintaada.
Haddii ilmahaagu qabo su'aalo, isla markiiba macallimiinta wargeli.
Kaalay hoolalkayada barashada tooska ah iyo fadhiyada kobcinta.
Waxaan bixinaa Hoolka Daraasadda iyo fasallo kobcinta sida PE, shaybaarka sayniska iyo xisaabta xeradeena Eagle Creek maalmaha salaasada iyo Khamiista. Waxaan ku bixinnaa Hoolka Daraasadaha Isniinta iyo Arbacada goobta Tigard.
Ku xiriir la-taliyaha dugsiga, Lataliyaha waxbarashada iyo khabiirka taageerada farsamada.
Waxaan heysanaa koox taageerooyin cajiib ah leh si loo xaqiijiyo guusha ardayda oo dhan. Haddii ilmahaagu leeyahay dhibaatooyin farsamo, arrimaha la xiriira maaraynta wakhtiga, dhibaatooyinka ku abuuraya jadwalka ama dareenka fasalka waxaan u joognaa inaan ku caawino! Kaliya weydii!
Barashada Virtual waa ikhtiyaar aad u wanaagsan ardayda badan sababao kala duwan awgood.
Wac la-taliyaha dugsiga si aad ugala hadasho si faahfaahsan haddii jawiga isku-dhafan ee isku-dhafan ee ku habboon yahay cunuggaagu ku habboon yahay awoodda, xiisaha iyo qaabka waxbarasho ee ilmahaaga.